Batman anwụọla! | Akụkọ akụrụngwa
Jose Alfocea | | Ihe nkiri na usoro
Ofwa nke ndị na-atọ ọchị na telivishọn na-eyi uwe iru uju mgbe ha matachara Jehova Ọnwụ nke onye omee akụkọ akụkọ Adam West bụ onye na XNUMXs nyere ọgaranya billionaire Bruce Wayne ndụ na n'abalị ọ nakweere àgwà nke dike Batman.
Adam West tụfuru ndụ ya na June 88 n'ụzọ dị jụụ na nke udo, nke ndị ọ hụrụ n'anya gbara ya gburugburu na mgbe ọ dị afọ XNUMX na mgbe enweghị ike imeri ọrịa leukemia ọ tara ahụhụ. Taa, anyị na-erite uru na akụkọ dị mwute na Actualidad Gadget iji cheta ọ bụghị naanị onye na-eme ihe nkiri, mana agwa na usoro ha kara akara akara nke omenaala ama.
1 Adam West, akụkọ ifo Batman, na-ahapụ anyị ruo mgbe ebighị ebi
2 Ọ bụghị naanị batman
Adam West, akụkọ ifo Batman, na-ahapụ anyị ruo mgbe ebighị ebi
Ọtụtụ n'ime unu agaghị echeta ya, ya na ezigbo ihe kpatara ya, ebe ọ bụ na ọ bụrụla ọkara narị afọ kemgbe onye omee ahụ Adam West rutere na obere enyo enyo na mmadụ abụọ ya nke nwa mgbei bara ọgaranya dịka Bruce Wayne, na nnukwu dike Na na. Taa, ọkachasị mgbe ọkaibe nke ahụ bụ trilogy nke "The Dark Knight" nke Christopher Nolan duziri wee gụọ Christian Bale, usoro "Batman" nke Adam West nọ na sixties nwere ike iyi ihe pere mpe na ogo na mmetụta pụrụ iche agbanyeghị, bụ ihe ịga nke ọma na-ebupụ n'ọtụtụ mba.
Ihe m ji n'aka dị ka onye ọ bụla, agbanyeghị na ụfọdụ n'ime anyị anaghịdị eche maka afọ nke usoro a, bụ okwu mmeghe:
Usoro Batman Anyị na-ekwu maka ya bụ William Dozier na Howie Horwirtz kere maka netwọkụ telivishọn ABC ebe nọrọ na mbara igwe naanị afọ ole na ole, n'etiti 1966 na 1968; bụ ngụkọta nke oge atọ na agbanyeghị, ha nyere maka 120 ngosipụta na taa bụ akụkụ nke analaes nke akụkọ ihe mere eme telivishọn.
Oge atọ na ihe karịrị otu narị ngosipụta nke na-ewe kụrụ ruo mgbe ahụ amaghị na telivishọn, na nnukwu akụkụ n'ihi ọdịdị Adam quirky nke ọrụ aha ya. The usoro ghọrọ a benchmark maka ọdịnihu nke telivishọn usoro oru karịsịa, na nke audiovisual mmepụta ke ofụri ofụri; n'ezie, ọ nwere nnukwu mmetụta na ọdịnala ndị ama ama na mbubreyo XNUMXs na mbido XNUMXs.
Mana dịka ị maara, Batman anaghị aga ebe ọ bụla, ọ na-agba ya gburugburu mgbe niile site na squire kwesịrị ntụkwasị obi, ịhụnanya ya, onye na-azụ ya ma ọ bụ ndị ọjọọ na-atụ ụjọ. Yabụ, na usoro nke sixties, Adam West pụtara yana:
Alan Napier dị ka Alfred, onye obu ihe ọ butụ andụ ma bụrụ nna nna Batman.
Burt Ward, n'okpuru akpụkpọ Robin.
Neil Hamilton na-egwuri egwu Commissioner Commissioner, Gordon.
Stafford Repp, dị ka Onye isi ndị uwe ojii O'Hara.
César Romero, onye na-egwu ihe ọjọọ na ama ama Jocker.
Vincent Price na ọrụ El Cascarón.
Burguess Meredith na-ewere njirimara nke onye ọzọ dị njọ, Penguin.
Mmekọahụ akara Joan Collins, a kacha mara amara maka ọrụ ọ na-arụ na usoro Dinatía n'etiti 1981 na 1989, dị ka La Sirena.
Julie Newmar dị ka Catwoman, ọrụ Ertha Kitt mechara rụọ.
Ọ bụghị naanị batman
Mana ka Adam West mara amara nke ọma maka ịkọwa Bruce Wayne / Batman na usoro ABC, ọrụ ya akwụsịghị ebe ahụ. Amụrụ na Walla Walla, obere obodo dị na Washington, na Septemba 1928, ọ nwetara asambodo na agụ akwụkwọ, mụọ akparamaagwa, ma jee agha. Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ rụrụ ọrụ dị ka nwoke na-enye mmiri ara ehi, mana ọ chọrọ ịgbaso nzọụkwụ nne ya dara ada wee bụrụ onye na-eme ihe nkiri.
O mere nke izizi ya dika isi na ihe ngosi onyonyo umuaka bu “The Kini Popo Show” na O sonyere na ihe kariri iri ato na ihe nlere rue mgbe o mechara nweta oru nke Batman.
Mgbe ngwụsị nke usoro ahụ gasịrị, na 1968, ọ nweghị ike imeri nsụgharị, ma ọ sonyere n'ọtụtụ mmepụta ma mee onwe ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro iri abụọ, gụnyere usoro ihe nkiri "Family Guy" Ee, Mayor West bụ Adam West.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Ihe nkiri na usoro » Batman anwụọla!
Na-asọpụrụ 9: ihe njedebe dị elu na ọnụahịa dị n'etiti